IMIZAMO kaTRUMP AYIPHUMELELI | Scrolla Izindaba
IMIZAMO kaTRUMP AYIPHUMELELI
Imizamo kaMengameli waseMelika uDonald Trump wokuguqula imiphumela yokhetho asanda kwehlulwa kulo, iphenduka iphutha elikhulu.
NgoLwesine ummeli kaTrump uRudy Giuliani ubonakale sengathi uyancibilika esithangamini nabezindaba ngesikhathi udayi wakhe wezinwele uqala ukuconsa ebusweni bakhe.
UGiuliani ubekhuluma nesithangami sabezindaba lapho ithimba labammeli bakaTrump lithe, uMengameli okhethiwe uJoe Biden ubebhaliswe ngemali yokhomanisi ukweba ukhetho kuTrump “obeselunqobe ngokusobala”.
Abukho ubufakazi balolu zungu olungenasisekelo kanye nawo wonke amacala angama-29 iqembu labammeli bakaTrump abawabekile kuze kube manje okungukukhwabanisa, lihoxiswe ngaphandle kwenkantolo.
Ukuncibilika kukaGiuliani kudonse umsindo wokuhleka kosomahlaya basebusuku. UTrevor Noah ophethe i-Daily Show ubuze ukuthi: “Ingabe ingqondo yakhe igcwele udoti? Iqiniso lithi, bengingazi ukuthi izinwele ziyaconsa kube ngathi ziya esikhathini.
“Kumele wazi ukuthi isu lakho lezomthetho olisebenzisayo liyabheda uma nezinwele zakho seziqala ukukhala ngalo.”
I-Drudge Report, indawo yezindaba evame ukweseka uTrump, ibinesihloko esithi: GHOULIANI.
Kodwa imizamo ekhula njalo kaTrump yokuguqula intando yeningi eMelika akuyona into ehlekisayo.
Yize ezoba ngumengameli izinyanga ezimbili nje kuphela, uTrump usebenzisa amandla ehhovisi lakhe ukufaka ingcindezi kumalungu eqembu lakhe i-Republican Party ukuthi aguqule ukhetho.
Njengoba imizamo yakhe yokulwa ngenkantolo ingahambi kahle, uTrump nabalingani bakhe banxenxa abalandeli beqembu ukuba bavimbe ukuqashelwa kokunqoba kukaBiden ezifundeni ezibalulekile lapho umphumela wokhetho wawumncane khona.
Ukuxoshwa kwezikhulu ezikhungweni zezokuphepha zixoshwa uTrump ngoba ethi abathembekile ngokwanele, nokufakwa kwama-hacks ezikhundleni zabo, sekwenze abanye abantu bathuka ukuthi mhlampe uhlela ukuvukela umbuso.
Kodwa kungcono ngoba nezikhulu eziningi zeqembu i-Republican ziyayiphikisa imizamo yakhe yokubahlukumeza.
UMitt Romney, u-Senator ovela eqenjini likaTrump, uthe “kunzima ukucabanga isenzo esibi kakhulu, esingenantando yeningi esenziwe ngumengameli waseMelika ohleli phansi.”
UBiden uhlale ethembile ukuthi uzobekwa njengoMengameli mhla zingama-20 kuMasingana. “Kunzima ukuqonda ukuthi le ndoda icabanga kanjani,” kusho uBiden kuleli sonto, enikina ikhanda. “Kunzima ukuyiqonda.”
UTrump unesizathu esihle kakhulu sokufuna ukuhlala ehhovisi. Uzolahlekelwa ngumzimba wakhe wokuzivikela kamengameli futhi kungenzeka abekwe icala lokubalekela ukukhokha intela, inkohlakalo nokukhwabanisa.
UJacob Zuma kumele alindele ukuthi uzoshayelwa ucingo kungekudala uTrump, ebuza ngamathiphu okuthi ungahlala kanjani ngaphandle kwejele.